Ingabe imvula eneasidi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Yini imvula eneasidi?
Sekuyiminyaka ethile manje, abantu baqala ukukhuluma ngohlobo oluyinqayizivele lwemvula. Ngokungafani nemvula sonke esiyaziyo, okuyiyona eyenza imisinga yemifula iqhubeke nokugcwalisa izindawo ezigcina amanzi esizisebenzisayo kamuva, kunolunye uhlobo oludala umonakalo omkhulu emvelweni: imvula eneasidi.
Lesi simo, noma sivela ezulwini, kuvela "ukubonga" ekungcoleni lapha, ku-biosphere. Izitshalo zamandla enuzi, izimoto kanye nezibulala-zinambuzane ngezinye zezizathu zokuthi kungani uMhlaba wonkana ulahlekelwa ukulingana kwawo ngokwemvelo.
1 Yini imvula eneasidi?
2 Ngabe unquma kanjani ukuthi i-acidity ye-liquid?
3 Iyini imiphumela yemvula eneasidi?
3.1 Emifuleni, emachibini, olwandle
3.2 Enhlabathini nasezitshalweni
3.3 Ezindaweni zomlando nezithombe ezibaziwe
4 Ingabe kukhona okungenziwa ukukugwema?
Ungomunye wemiphumela yokungcola, ikakhulukazi umoya. Lapho ushisa uphethiloli, noma ngabe uyini, amakhemikhali avela kuwo adediselwa emkhathini njengezinhlayiya ezimpunga lokho kungabonakala kalula. Kepha akukhishwa kuphela laba, Futhi amagesi angabonakali ayingozi kakhulu empilweni, njenge-nitrogen oxide, i-sulfur dioxide ne-sulfur trioxide.
La magesi, lapho ehlangana namanzi emvula, yakha i-nitric acid, i-sulfurous acid ne-sulfuric acid leyo, ehambisana nemvula, iwela phansi.
Ngabe unquma kanjani ukuthi i-acidity ye-liquid?
Ngale njongo okwenziwayo thola i-pH yakho, ekhombisa ukuhlushwa kwama-hydrogen ions. Isuka ku-0 iye ku-14, kuthi i-0 ibe ne-asidi kakhulu bese kuthi engu-14 ibe yi-alkaline kakhulu. Ingakalwa kalula, ngoba namuhla sinamamitha we-pH edijithali nemichilo ye-pH edayiswa emakhemisi. Masazi ukuthi sizisebenzisa kanjani:
Imitha ye-digital pH noma imitha ye-pH: sizogcwalisa ingilazi ngamanzi bese sethula imitha. Ngaso leso sikhathi izokhombisa izinga layo le-asidi ezinombolweni. Inani eliphansi, kulapho uketshezi luyoba namandla kakhulu.
Imichilo ye-pH yokunamathela: le micu isabela ngokushesha lapho ihlangana namanzi. Ngakho-ke, uma sifaka ithonsi kuzo, sizobona ukuthi zishintsha kanjani umbala, ziphenduke zibe luhlaza, ziphuzi noma ziwolintshi. Ngokuya ngombala eliwutholayo, kuzosho ukuthi uketshezi luyi-acid, aluthathi hlangothi noma alkaline.
Imvula ihlale ine-asidi encane, okungukuthi, i-pH yayo iphakathi kuka-5 no-6, ngoba ixubeka nama-oxide ngokwemvelo emoyeni. Inkinga ivela lapho lowo moya ungcoliswe kakhulu: bese i-pH yehlela ku-3.
Ukusinikeza umbono wokuthi imvula ingaba ne-asidi kanjani, kuzokwanela ukuthi sithathe-noma sizame- uketshezi lukalamula osanda kusikwa. I-pH yalesi sithelo sili-2.3. Iphansi kakhulu kangangokuba ivame ukusetshenziselwa ukwenza i-asidi, okungukuthi, ukwehlisa i-pH, yamanzi ane-alikhali.
Iyini imiphumela yemvula eneasidi?
Emifuleni, emachibini, olwandle
Uma sikhuluma ngemiphumela, miningi futhi mibi kakhulu kubantu abaningi abaphilayo. Njengoba singcolisa, amanzi emifuleni, emachibini nasolwandle aba ne-asidi, okubeka engcupheni izilwane ezibalulekile kubantu njengezimfanzi, iminenke noma izimbaza. Lokhu, njengoba bephucwe i-calcium, baba "amagobolondo" noma "imigodi" ebuthakathaka. Kepha akupheleli lapho: ama-roe nama-fingerlings kungenzeka ukuthi akhubazeke, futhi angachanyuselwa.
Enye inkinga enkulu edala ukuthi i-acidification yenhlabathi. Yize kuyiqiniso ukuthi izitshalo eziningi zikhula enhlabathini ene-asidi, njengeziningi zalezo ezivela e-Asia, kukhona ezinye ezizoba nobunzima obukhulu ukuzivumelanisa, njenge-carob noma i-alimondi, izihlahla ezimbili esifundeni. IMedithera engakhula kuphela emhlabathini we-limestone. Imvula ene-asidi izovimbela izimpande zakho ekutholeni izakhamzimba ezibalulekile, ikakhulukazi i-calcium. Ngaphezu kwalokho, izinsimbi zizongena ezizoshintsha ukwakheka kwenhlabathi (manganese, mercury, lead, cadmium).
Izimila zizoba ngomunye wabathinteke kakhulu. Futhi, ngakho-ke, nathi, ngoba asinciki kubona kuphela ukuthi baphefumule, kodwa futhi nokuthi sikwazi ukuzondla thina.
Ezindaweni zomlando nezithombe ezibaziwe
Imvula ene-asidi izothinta kakhulu lezo zakhiwo nezithombe zomlando ezenziwe ngabantu nge-limestone osukwini lwabo futhi esezifinyelele ekhulwini lama-XNUMX. Isibonelo kungaba yimipiramidi yaseGibhithe. Kungani? Incazelo ilula: uma amanzi ane-asidi ehlangana netshe, liyaphenduka bese liphenduka libe usimende, oncibilika kalula.
Ingabe kukhona okungenziwa ukukugwema?
Kucacile. Isixazululo ukuyeka ukungcolisa, kepha lokho okwamanje ngeke kwenzeke uma ucabanga ukuthi singabantu abayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-7 abahlala emhlabeni. Ngakho-ke, kungenzeka ukubheka eminye imithombo yamandla; khetha okuvuselelekayo ezihlanzeke kakhulu kunophethiloli wezinsalela.
Ezinye izinto ezingenziwa yilezi:
Sebenzisa kancane imoto nezinye izithuthi zomphakathi.
Ukubheja ezimotweni zikagesi.
Dala imikhankaso yokuqwashisa ngezemvelo.
Thuthukisa amaphrojekthi asebenzela ukunciphisa ukungcola.
Njengoba ukwazi ukubona, imvula ene-asidi iyinkinga enkulu kakhulu ethinta kakhulu hhayi izitshalo noma izilwane kuphela, kodwa nayo yonke iplanethi yoMhlaba.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Yini imvula eneasidi?
Bengiluthanda ulwazi, belusizo kakhulu, yilokho ebengifuna ukukwazi
Ngiyajabula ukuthi ikunikeze, Franco. Ukubingelela.
Ukuguquka kwesimo sezulu kusongela ukuqeda imithombo yethu yamanzi
Izithombe: Lokhu kubukeka kanjena umhlaba ngesikhathi '' sehora lomhlaba ''